February 2017 - Page 10 of 31 - Sawirrotv
Caalamka & Qarixii Suuqa Kaawo Goday (VIDEO)
Qaraxa ayaa la sheegayaa inay ku geeriyoodeen dad gaaraya ilaa 40 qof, oo gabigooduba ahaa dad shacab ah oo aan waxba galabsan, oo ka dukaamaysanayay Suuqa Kaawo Godeey, kadib markii lagu weerarayay gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay oo uu waday nin naftii Halige ahaa. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Madaxweyne Farmaajo oo qoraal …
Soomaali Laga Soo Daadgureeyay Dalka Yemen oo soo Gaaray Magaalada Berbera (SAWIRRO)
February 20, 2017 – Safaarada Soomaaliya ee dalka Yemen iyo Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobay iyo Hay’addo kale oo iskaashanaya ayaa soo daadgureeyay dad badan oo Soomaaliyeed oo ku xanibnaa dagaallada ka socda dalka Yemen. Qunsulka Guud ee Soomaaliya ee Magaalada Cadan, Axmed Cabdi Xasan ayaa warbaahinta u sheegay in dad badani ka soo badbaadiyeen dagaalada …
Milkiilaha Taleefishinka Universal oo Shalay Caserliiqii Lagu Xiray Magaalada Hargeysa
February 20, 2017 – Wararka ka imaanaya Magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland ayaa sheegaya in shalay casarliiqii halkaasi lagu xiray Milkiilaha Taleefishinka Universal Inj. Axmed Abuubakar. Ciidamada amniga ee maamulka Somaliland ayaa la sheegay in shalay Gelinkii dambe ay guri uu ka deganaa Magaalada Hargeysa ay ka ka xaysteen, islamarkaan ay xabsiga u taxaabeen. Ilaa …
Madaxweyne Farmaajo oo Caawa Booqday Dadkii Maanta ku Dhaawacmay Qaraxii ka Dhacay Suuqa Kaawo Godey (VIDEO)
February 19, 2017 – Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa waxa uu caawa Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ku booqday dadkii faraha badnaa, ee maanta ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Suuqa Kaawo Godey ee Degmada Wadajir. Qaraxan oo ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, ayaa waxaa ku dhimatay in ka badan 35 qof, iyadoo …
DAAWO: Goobtii uu Maanta Qaraxa ka Dhacay ee Suuqa Kaawo Godey oo Aad u Bur-burrtay (SAWIRRO)
February 19, 2017 – Weerarkii Arxan darada ahaa ee maanta ka dhacay suuqa Kaawa Godey, ayaa wuxuu ahaa mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa ee ka dhacay Magaalada Muqdisho, maadaama gaarigani lagu dhex qarxiyay dad shacab ah oo Goobahaasi ka adeeganayay. Waxaa la xaqiijiyay in dad kor u dhaafaya ilaa 35 qof ay ku …
Madaxweyne Farmaajo oo ka Hadlay Qaraxii Maanta ka Dhacay Suuqa Kaawo Godey ee Degmeda Wadajir
February 19, 2017 – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo, ayaa maanta si adag u cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay suuq ganacsi oo ku yaala Degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Nin la sheegay inuu isi soo miidaamiyay oo la socday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, ayaa isku qarxiyay dad buuxay Suuqa …
Booqashadii Farmaajo ee Isbitaalka (VIDEO)
Madaxweynaha Soomaaliya oo u kuur-galay xaaladda dhaawacyada ayaa waxa uu caawa booqday Isbitaalka Madiina, Waxana uu sheegay inuu ka xun yahay dhibaatada dadkaasi ka soo gaartay qaraxa, isagoona ballanqaaday in dowladiisu ay gacan u fidin doonto dadjii ay waxyeelada soo gaareen. Madaxweynuhu wuxuu shacabka uu ugu baaqay in ay soo sheegaan qaraxyada, iyadoo uu ballanqaaday …
Faah Faahino Dheeraad ah oo ka soo Baxaya Qaraxii Maanta ka Dhacay Nawaaxiga Kaawo Godey ee Magaalada Muqdisho (VIDEO)
February 19, 2017 – Ugu yaraan 30 qof oo Shacab ah ayaa la sheegayaa inay ku geeriyoodeen qarax duhurnimadii maanta ka dhacay xaafada Kaawo Godeey ee magaalada Muqdisho. Qaraxani ayaa ka dhacay goob aad u mashquul badneyd oo ay dadku isugu yimaadaan, waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo soo gaartay dad shacab ah oo fara …
Qaraxii ka Dhacay Suuqa Kaawo Godeey (VIDEO)
Qaraxani ayaa ka dhacay goob aad u mashquul badneyd oo ay dadku isugu yimaadaan, waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo soo gaartay dad shacab ah oo fara badan. Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir,C/ Fitaax Cumar Xalane ayaa isagana warbaahinta u sheegay in kooxihii qaraxa soo diyaariyay u jeedkoodu uu ahaa oo kaliya dhibaateynta bulshada Soomaaliyeed.
DEG-DEG: Qarax Geeri Badan Sababay oo Goor Dhow ka Dhacay Magaalada Muqdisho
February 19, 2017 – Wararka inaga soo gaaraya Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ayaa sheegaya in goordhaw uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo ay dad badani ku dhinteen . Qaraxani oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, ayaa wuxuu ka dhacay nawaaxiga halka loo yaqaan Kaawo Godey oo ka tirsan Degmada Wadajir. In …